သီလပုံစံဖြည့်ကြပါ အမှတ် (၄) (မုသာဝါဒ – – -) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » သီလပုံစံဖြည့်ကြပါ အမှတ် (၄) (မုသာဝါဒ – – -)
သီလပုံစံဖြည့်ကြပါ အမှတ် (၄) (မုသာဝါဒ – – -)
Posted by ကိုငြိမ်းအေး on Oct 16, 2011 in Buddhism, Opinion - Op-ed, Think Tank | 20 comments
(ပုံစံအားဖြင့် မဟုတ်၊ မမှန်စကား မပြောရခြင်း) လူတွေ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ထိခိုက်နစ်နာအောင် မဟုတ်၊ မမှန်စကားများ ပြောဆိုဆက်ဆံနေကြမည်ဆိုပါက လူအ ချင်းချင်း ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့ကာ မငြိမ်းချမ်းမှုများဖြစ်နေရပေမည်။
လူအချင်းချင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ယုံကြည်ပြီး ဆက်ဆံနေထိုင်ကြမှသာ ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်မှုလို့ ခေါ်ရမှာဖြစ်ပေသည်။
ဒါကြောင့် လူတွေတစ်ဦးကို တစ်ဦး ထိခိုက်နစ်နာလောက်သော မဟုတ်၊ မမှန်စကားများဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံမှုများ မပြုသင့်ပေ။
ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ စကား (အပြော)တင်လားဆိုတော့ – – – – မပြည့်စုံသေးပါ။
လူသားတွေ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ကြတဲ့အခါမှာ အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်(ပုံဟန်) ဒီသုံးမျိုးဖြင့် ဆက်ဆံကြရပါတယ်။
ဒီသုံးမျိုးကို ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာ ပုံစံဖြည့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် – – – – –
လုပ်ငန်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်လို့ လူချင်းချိန်းဆို တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာ အချိန် နောက်ကျမှ ရောက်လာခြင်း၊ (သို့မဟုတ်) ပျက်ကွက်ခြင်းစတဲ့ အပြုအမူ၊ အလေ့အထ များသည် အချင်းချင်းယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာစေတာမို့ လူ့ငြိမ်းအေးမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။
အထူးသဖြင့် ထိုအချိန် မတိကျမှုသည် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အစဉ်အလာအလေ့အထတစ်ခုအနေဖြင့် ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတာမို့ “မြန်မာစံတော်ချိန်“(မြန်မာတို့ အချိန် အပေါ်ထားသည့် သဘောထား) ဟု ပြောစမှတ်ဖြစ်နေပေသည်။
ထိုအချိန်အပေါ် အလေးမထားကျင့်သုံးမှုတွေကြောင့် အချင်းချင်း ယုံကြည်မှုများ ကင်းမဲ့လာကြကာ အစုအဖွဲ့များလုပ်ကိုင်ကြသည့်အခါ မညီညွတ်နိုင်တော့ပါ။ ညီညွတ်မှုမရှိလျှင် အောင်မြင်မှုလည်း မရနိုင်ပါ။ ကိုယ်လုပ်သလောက်မှ မအောင်မြင် ရခြင်းကြောင့် ထိုသူတို့ရဲ့ ဘ၀ဟာမငြိမ်းအေးနိုင်တော့ခြင်းသည် သူတစ်ပါးကို ထိခိုက် နစ်နာ (ယုံကြည့်မှုကင်းမဲ့) စေသည့် (အချိန်မတိကျ) လှည့်ဖြားမှုကြောင့်ဟု သုံးသပ်ရမှာ ဖြစ်ပေသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချရာတွင်လည်း ရှိသင့်တဲ့ အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ထုတ်လုပ်မှသာလျှင် ၀ယ်ယူသုံးစွဲသူများရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုရရှိ ပေမည်။ တချို့သော ကုန်ထုတ်လုပ်သူတို့သည် ကုန်ပစ္စည်း စထုတ်လုပ်ကာစက အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းအပြည့်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော်လည်း နာမည်ရလာသည့်အခါ အရည်အသွေးလျော့ပြီး ထုတ်လာကြခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းများကျဆင်းသွားရခြင်းသည်လည်း ယုံကြည့်မှုကင်းမဲ့စေသည့် လှည့်ဖြားမှုကြောင့်ဟု သုံးသပ်ရမှာ ဖြစ်ပေသည်။
လူအချင်းချင်း ပြုမူဆက်ဆံကြသည့်အခါတွင် မိမိထက်သာသူကို တစ်မျိုး၊ နိမ့်သူ ကို တစ်မျိုး အဆင့်အတန်းခွဲခြားကာ လွန်လွန်ကဲကဲ ဆက်ဆံသော (အထက်ကိုး ဖား၊ အောက်ကို ဖိ) သောဆက်ဆံမှုများနှင့်
တချို့ဌာနဆိုင်ရာတို့တွင် သတ်မှတ်ထားသော မူဝါဒများဖြင့် ၀န်ထမ်းများအား စီမံအုပ်ချုပ်ရသည့်အခါ “လူခင်တော့ မူပြင်တယ်၊ လူမုန်း တော့ မူသုံးတယ်” ဆိုတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတို့ကြောင့် လူအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပျက်ပြားကြရကာ မငြိမ်းမချမ်းဖြစ်ရခြင်းတို့သည် ဆက်ဆံပုံ ပုံမမှန်၍ ယုံကြည့်မှုကင်းမဲ့စေသည့် လှည့်ဖြားမှုများ ကြောင့်ဟု သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပေသည်။
၀န်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်ကြသည့်အခါ မိမိလုပ်သင့်သော၊ လုပ် နိုင်သော ပမာဏထက် လျော့၍ လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် ပိုလွန်၍လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့သည် မိမိ အပေါ် ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။
လုပ်နိုင်သည်ထက် လျော့၍ လုပ်ကိုင်သည့်အခါ မိမိအရည်အသွေးများ တဖြည်း ဖြည်း ကျဆင်းသွားရသလို နောက်နောင် ကိုယ့်အရည်အချင်းအတိုင်း လုပ်ပြမိလိုက် ကာမှ နောင်အခါ ဘာပဲလုပ်လုပ် မိမိအပေါ် ယုံကြည်မှု အပြည့်အ၀ မရှိနိုင်ကြတော့ပါ။
လုပ်နိုင်သည်ထက် ပိုလွန်၍ လုပ်ကိုင်မိပြီဆိုလျှင်လည်း လူ ပိုပင်ပန်းလာကာ ရေရှည်မှာ တဖြည်းဖြည်းလုပ်အားများ ကျဆင်းသွားမှာဖြစ်သလို နောက်နောင် ထိုကဲ့သို့ မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဟု ငြင်းဆန်ပါက မည်သူမျှယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်တော့ပါ။
ဒါသည် မိမိရဲ့လုပ်အားစိုက်ထုတ်မှုတွင် လူယုံကြည်မှုကင်းမဲ့စေအောင် ပြုမူဆောင် ရွက်မှု (လှည့်ဖြားမှု ဖြစ်မှန်းမသိခြင်းဖြစ်သွားမှု)တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
စကားပြောဆိုဆက်ဆံကြသည့်အခါတွင်လည်း မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုမှုများကို တတ်နိုင်ပါက ရယ်မောစရာတောင် မပြောဆိုသင့်ပေ။ ဘာရယ်မဟုတ် ခပ်ပေါ့ပေါ့လေး မဟုတ်မမှန်စကားတွေပြောဆိုမိရာမှ အလေ့အကျင့်ဖြစ်သွားကာ နောက်နောင် လူအ ချင်းချင်း ထိခိုက်စေသည့် မဟုတ်မမှန်စကားများပြောဖို့ ၀န်မလေးတော့ပါ။
တကယ်တော့ လူလူချင်းဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာ လှည့်ဖြားတတ်သူများသည် လောကဖြစ်စဉ်တွေပေါ်မှာ အမှန်အတိုင်းရင်ဆိုင်ရဲသည့် စိတ်သတ္တိအားနည်း လို့ဖြစ် ပေသည်။ စိတ်သတ္တိအားနည်းသူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို မိမိပင်ယုံကြည်မှုမရှိတော့၍ ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုတွေ မရနိုင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှ ကိုယ်မယုံလျှင် တစ်ပါးသူတွေက ဘယ်မှာ ယုံကြည်ကြပါတော့မည်နည်း။ လူ လူချင်းယုံကြည်မှု မရှိတော့လျှင် ဘယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းပါတော့မည်နည်း။
ဒါ့ကြောင့် လောကဖြစ်စဉ်တွေပေါ်မှာ အမှန်အတိုင်း ရင်မဆိုင်ရဲသော အပြုအမှု များဖြစ်သည့် ဥပမာအားဖြင့်
ကိုယ့်ရှိတာနဲ့ မနေပဲ သူများထံမှ ပစ္စည်းငှားရမ်းဝတ်ခြင်း၊
(မလိုအပ်ပဲ) ဆံပင်ဖြူနေတာ ဆေးဆိုးခြင်း၊
(မလိုအပ်ပဲ) နှုက်ခံနီဆေးဆိုးခြင်း စသော အပြုအမူတို့သည်လည်း စိတ်သတ္တိ အားနည်းသူတွေရဲ့ အပြုအမူများဖြစ်ခြင်းကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ကျဉ်သင့်ပေသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်ရှိ “အားနာတယ်“ဟူသော ကိစ္စမှာလည်း အမှန်ကို ရင်မဆိုင်ရဲသော (မ၀ံ့သော၊ မပျက်သားသော) စိတ်သတ္တိအားနည်းခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ တချို့အားနာမှုလွန်ကဲခြင်းတို့ကြောင့် ရေရှည်တွင် အချင်းချင်း ဆက်ဆံမှုများ ပျက်ပြားလာရပြီး မငြိမ်းချမ်းမှုများဖြစ်ကြရခြင်း သည်လည်း သူတစ်ပါးကို သဘောအမှန်အတိုင်း မဆက်ဆံပဲ လှည့်ဖြားမှုဖြစ်မှန်း မသိဖြစ်သွားခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
ဒါ့ကြောင့် လူအချင်းချင်းဆက်ဆံကြသည့်အခါမှာ အားနာမှုများဖြင့် ဆက်ဆံ နေကြခြင်းသည်လည်း မငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့ လမ်းစပေတည်းလို့ ဆိုရပေမည်။
တစ်ခါက ဈေးသည်အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို ဈေးဝယ်သူက ဈေးဆစ် တဲ့အခါ ဈေးသည်အမျိုးသမီးက “ဈေးပြောရမှာ အားနာပါတယ်၊ မောင်ကြီး အဆင်ပြေ သလို ကြည့်တာ ပေးပါ”တဲ့၊ ဈေးဝယ်သူကလည်း “ကျနော်လည်း ဈေးဆစ်ရမှာ အားနာလို့ အနည်းဆုံး ဈေးကိုပြောပါ” ဆိုပြီး အားနာ ပြိုင်ကြသတဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ ဈေးသည်အမျိုးသမီးက “မောင်ကြီး အားနာတာက တော်သေးတယ်၊ ကျမ အားနာတာက အခုမွေးထားတဲ့ ကလေးငါးယောက် ဘယ်သူ့ အဖေ ခေါ်ရမှန်း မသိလို့ ခက်နေရတာပေါ့”တဲ့။ ဒါ့ကြောင့် အားနာကြီးလျှင် အဖေတွေများတတ်ပါတယ်။
မြန်မာတွေ အားနာကြီးလွန်းလို့ ကမ္ဘာ့အလည်မှာ (အစစ၊ အရာရာ) မျက်နှာ ငယ်နေရပုံကို နံပါတ် (၄) သီလတွင် ပုံစံဖြည့်၍ နားလည်စောင့်ထိန်းနိုင်ကြပါလေ။
(၅။ ယစ်မူးစေတဲ့အလုပ်တွေမှာ သတိမေ့လျော့စေတဲ့အထိ သုံးဆောင်မှီဝဲမှုကို မပြုလုပ်အပ်ခြင်းကို – – – – ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။ )
“လူခင်တော့ မူပြင်တယ်၊ လူမုန်း တော့ မူသုံးတယ်”
အဲဒါက ပြောရမှာတော့ အားနာတယ်လေ။
မဟာစည်ဆရာတော် နတ်နဲ့ စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ
ဟို အဓမ္မဖော်ထုတ်နေတယ်ဆိုပြီး အသံကောင်းဟစ်နေတဲ့
ပရစ်တွေ ဘာဖြစ်လို့ နှားစေးနေကြလည်းမသိ။
မိုးကုတ်တို့၊ ကျောက်သင်္ဘောတို့၊ ကြောင်ပန်းတို့ကျတော့ မူ သုံးတယ်။
မဟာစည်ကျတော့ – – – – – ။
အေးလေး ဘယ်သူမဆို ကိုယ်သန်ရာ၊ သန်ရာပြောမှာပဲ၊
ဒါ့ကြောင့် mggwa လည်း ကိုယ်သန်ရာကို ၀င်ဂွကျကြည့်တာ
တကယ်မဟုတ်ဘူး/ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတာဆိုရင်လဲ ပြီးတာပါပဲ
တကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကော – ဘာမှားလို့လဲ
ယောဂီရသေ့မတဦးက ပါဠိစကားလုံးတွေလျှောက်ပြောနေတယ်။ စုံစမ်းကြည့်တော့ မဟာစည်ဆရာတော်နဲ့ စကားပြောချင်လို့ နတ်တဦးက တောင်းဆိုတာ။
မဟာစည်ဆရာတော်က ပရိတ်သတ်အလည်မှာ တနာရီလောက်ပြောဘို့ခွင့်ပြုတယ်။
ချိန်းဆိုထားတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီနတ်ကပူးပြီး ဆရာတော်ကို ဂါထာတွေနဲ့ ပူဇော်တယ်။ ဆရာတော်က ပရိတ်သတ်ကြားမှာ ထင်ရှားစေမယ့် အချက်တချို့မေးမြန်းတယ်။ (စကားပြောရတာသိပ်အကျိုးရှိပုံမပေါ်လို့) အဲဒီနတ်နဲ့အဖွဲ့ကို ဂါထာတိုလေး နှစ်ပုဒ်ပါဠိလိုဟောပြီး တွေ့ဆုံပွဲရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။ ဒါပဲလေ။
ပါဠ်ိလိုတတ်တဲ့ ရသေ့မက လိမ်တာတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိမ်ပစေပေါ့။ တခြားနတ်တွေလဲ တကယ်မပူးပဲလိမ်နေတာအများကြီး။
မဟာစည်ဆရာတော်နဲ့အဖွဲ့က နာမည်ကြီးအောင် အကွက်ဆင်ပြီးလိမ်တာလို့ ပြောချင်ရင်တော့-
အဲဒီအသံခွေကို မဖြန့်ချီဘို့ ဆရာတော်က တားလိုက်တယ်လေ။
အဲဒီအချိန်မှာ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ သူ့ ပရိယတ်ပဋိပါတ် အရည်အချင်းတွေကြောင့် အလွန်နာမည်ကျော်ပြီးသား နိုင်ငံတော်ဘုန်းကြီးပါ။ သူနာမည်ကြီးအောင် ဘာမှမဟုတ်တဲ့ နတ်ပုံပြင်ပြောပြီး လုပ်ယူစရာမလိုပါဘူး။
ပြီးတော့ တရားပြည့်ဝတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ နတ်နဲ့စကားပြောတာ ဘာမှမဆန်းပါဘူး။
လယ်တီဆရာတော်ဘုရာကြီး၊ ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး များနဲ့တကွ အခြားများစွာသော ဆရာတော်များကို နတ်စသည့် အခြားဘုံသားများက တွေ့ဆုံတာ ဖူးမျှော်တာ ပူဇော်တာတွေ အမြောက်အများရှိပါတယ်။
ယုံသူများကိုတော့ မပုတ်ခတ် မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။
mggwa က ကိုယ်သန်ရာကို ၀င်ဂွကျလိုက်တော့
xman ကလည်း သူသန်တဲ့ နတ်တွေအကြောင်းနဲ့ ၀င်ကန့်ကွက်တယ်။
ok- ဒါဆို မျှသွားပြီ/
ကိုယ်ကတော့ ဂြိုလ်သားတွေအကြောင်း မရေးတော့ဘူး/
စာအုပ်ထဲကနေ သူပြော၊ ကိုယ်ပြောနဲ့ သိထားတာမို့၊
ကိုယ်သိထားတာကတော့ လူသားတွေ ငြိမ်းချမ်းရင်
ကျန်တာ အားလုံးOk ပဲ/
ဒီ postက ဒါပဲ မဟုတ်လား။
အပြင်မှာ တကယ်မရှိပဲ၊ စိတ်ကူးထဲမှာပဲ ရှိတယ်ထင်နေတဲ့
အရာတွေနဲ့ စကားပြောနေတဲ့သူကို ဘာလို့ပြောမလဲ။
တစ်ယောက်ထဲ စကားပြောနေတဲ့ သူကိုရော ဘာထင်ကြမလဲ။
တကယ်ရှိတဲ့ နတ်ကိုတော့ သိဖို့လိုပါတယ်။
၀င်ပူးပြီး ပြောချင်ရာပြောတဲ့ နတ်ကတော်နတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါ။
နို့မဟုတ်ရင် နတ်ကတော် သာသာတွေ ဖြစ်နေကြမှာစိုးလို့ပါ။
အပေါ်က comment မိတ်ဆွေများ ရန်မဖြစ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ (အများစု) အချိန်မတိကျတာကတော့သေချာတယ်။
အချိန်မတိကျတော့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ချိန်းဆိုကြရင် မယုံကြဘူးဖြစ်နေတယ်။
အစည်အဝေးတစ်ခုခေါ်ရင် ချိန်ထားတာက ၁၀-နာရီ၊ စတာက နေ့ ၁-နာရီတောင် မစနိုင်သေးဘူး။
ဒါဖိတ်ကြားထာတဲ့သူတွေကို လိမ်မိတဲ့သဘောရောက်မရာက်တော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
အစည်းဝေးဖိတ်ကြားထားတဲ့အချိန်အတိုင်း မစဖြစ်ရင်တော့ ကြာရင် လူတွေက ယုံကြမှာတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒီလိုအစည်းအဝေးလိုကိစ္စမျိုးတောင်မှ မယုံရတော့ရင် ကျန်တာတွေ ဘာယုံစရာရှိတော့မှာလဲ။
လူတွေ ယုံကြည့်မှု မရှိကြတော့ဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်လုပ်မအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူးလို့ ဆိုရမှာပဲ။
မုသာဝါဒကံရဲ့ အကျိုးဟာ လူယုံကြည်မှု မရှိတာကို ဖြစ်စေခြင်းကြောင့်
ဒီလို လူယုံကြည့်မှုကို ထိခိုက်စေတဲ့ အလုပ်ဟာ မုသာဝါဒထိုက်၊ မထိုက်တော့ ဆိုတာ ဝေဖန်ကြည့်ကြပါ။
ကြောင်ကြီးငယ်ငယ်က ရည်းစားစာလိုက်ပေးတော့ မေမေနဲ့တိုင်ပြောမယ်လို့ ခြိမ်းချောက်ခံရတယ်။ တဂယ်တိုင်လည်းမတိုင်ဘူး။ အဲဒါ လိမ်တာဟုတ်မဟုတ်…..
နောက်တစ်ခါ လိုက်ကြောင်ကြည့်လို့ မေမေနဲ့တိုင်ပြောမယ်လို့ပြောရင်ကော ယုံမှာလား ကိုကြောင်။
မယုံတော့ရင် – – – – ညှင်း – – ညှင်း- – – ညှင်း
သဘောပေါက် ကိုယ့်လူ နားမဝေးရင်ပေါ့။
ဒီစကားလေးတောင်မယုံရတော့ရင် ဘာကိုယုံတော့မလဲ ကိုကိုကြောင်ရယ်။
ဒီလိုမိန်းမရှောင် မရှောင်ရင် သင့်ကို လိမ်တောမည်။ (ဗိုက်ခေါက်ကို)
မုသာဝါဒ ကို လိမ်ညာမှုတင်မကဘဲ ။ ပိသုဏ၀ါစာ၊ ဖရုသ၀ါစာ၊ သမ္ဖပ္ပလာပ၀ါစာ စသည့် ၀စီဒုစရိုက်ဆိုတာတွေဟာ …
မိမိလောဘ-ဒေါသ-မနာလိုမှု- အထင်ကြီးခံလိုမှု- အထင်သေးမှာကြောက်မှု စတဲ့ စိတ်တွေကို အဟုတ်ထင် ငြိတွယ် – ဆုပ်ကိုင်မိရာမှ စတင်ဖြစ်လာရလေသည်။
အကြောင်းရင်းကို သတ်ဖို့ လိုလေသည်။ အကြောင်းရင်းကို အဓိကမထားပဲ အကျိုးတွေ လိုက်သတ်နေလို့ကတော့……..အဆုံးမရှိ။
စိတ်သာလျှင် အရာအားလုံး၏ ရှေ့သွားဖြစ်၏။ (ဓမ္မပဒ)
(အကြောင်းရင်းကို သတ်ဖို့ လိုလေသည်။ အကြောင်းရင်းကို အဓိကမထားပဲ အကျိုးတွေ လိုက်သတ်နေလို့ကတော့……..အဆုံးမရှိ။
စိတ်သာလျှင် အရာအားလုံး၏ ရှေ့သွားဖြစ်၏။ )လို့ True Answerကဆိုတော့ စိတ်ဟာ အကြောင်းလား၊ အကျိုးလားဆိုတာ အရင်ဝေဖန်ဖို့ လိုပါတယ်။
အကြောင်း၊ အကျိုးလုံးထွေးနေလို့ သင့်ပါ့မလား။
စိတ်ဟာ အကြောင်းလား၊ အကျိုးလား ?
realman ရေ စိတ်က အကြောင်းလား အကျိုးလား မင်းဟာမင်း ဆုံးဖြတ်လေ။
ငါရေးတဲ့စာကို မြင်ပြီး ပြန်ပြောချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။
မိုးပြာဝါဒကို အမှန်ပဲလို့ ထင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်။
ဦးဥာဏ ထောင်ချခဲ့ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မကျေနပ်စိတ်ဖြစ်တယ်။
ထိုမှတဆင့် မိုးပြာဝါဒ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ၀ါဒဖြန့်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်။
လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ကို အခြေခံသည်ဆိုသော mg ကို တွေ့ရာမှ အသုံးချလိုစိတ်ဖြစ်တယ်။
ထိုမှတဆင့် ဆွေးနွေးမှု (သို့) ငြင်းခုန်လိုမှု (သို့) မလိမ့်တပတ်လုပ်မှု ဖြစ်တယ်.
အဲလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပေါကွာ။ ဘယ်စိတ်က အကျူိး ဘယ်စိတ်က အကြောင်းလဲ ဆိုတာ။
True Answer သင့်မှာ မိုးပြာစွဲ အရမ်းစွဲနေလေပြီ။ ကြောင်ကြီးတို့လိုပဲ မြန်မာထေရ၀ါဒရဲ့စာပေအဖွင့်တွေနဲ့ မတူတိုင်း မိုးပြာအဖွဲ့ကလို့ပဲ ယူဆကြတယ်နဲ့ တူတယ်။
realman ဆိုတာ အမှန်တရားကို မျက်စိမပိတ်၊ အစွဲမထားပဲ အမှန်လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူပါဗျာလို့ ခဏခဏ အပ်ကြောင်းထပ်အောင်ပြောနေတာလဲ သဘောမပေါက်။
တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ “ငါတို့ပြောတာပဲ အမှန်၊ ဒါပဲယုံ၊ ငါတို့နဲ့ မတူတာအမှား၊ အဲဒါတွေ မလေ့လာနဲ့ “ဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့အသိဥာဏ်ကို ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ အရာမှန်သမျှ၊ စနစ်မှန်သမျှ၊ ၀ါဒမှန်သမျှကိုတော့ ဘယ်တော့မှ လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ လူ့ အသိဥာဏ်(အပင်)အထက်မှာ လောင်ရိပ်လိုမိုးနေတာတွေကို ဖယ်သွားရမှာပဲ၊ မြေသြဇာလို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အရာတွေကိုတော့ ကြိုဆိုနေမှာပါ။ ဒါဆို ယနေ့ မြန်မာ ထေရ၀ါဒီတွေဟာ လူ့အသိဥာဏ်ကို မြေသြဇာလို ပံပိုးပေးနေတာလား၊ လောင်းရိပ်လို အုပ်ချုပ်ချင်နေတာလား၊ ဆိုတာ လုပ်ရပ်တွေ ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်လေ။
ငါတို့ပြောတာပဲ ဘုရားဟောအစစ်ဆိုပြီး ဘုရားခုတုံးလုပ်၊ လောင်းရိပ်လို လူ့အသိဥာဏ်တွေ ပိတ်ဆို့နေတာမို့ ပြောနေရတာပဲ။
လူ့အသိဥာဏ်တွေကို လွတ်လပ်ခွင့် မပေးတာဆိုရင် ထေရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မဟာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိုးပြာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ – – – -ဘယ်ဝါဒမဆို ဝေဖန်သွားမှာပဲ၊ ၀ါဒတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူး၊ လူ့အသိဥာဏ်တွေ လွတ်လပ်ခွင့် ပိတ်ဆို့မှုကို အဓိကပြောနေတာလို့ သဘောပေါက်ပါ။
ကိုယ့်ဥာဏ်ကို သူများ (စာပေစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ)တွေက အသိမ်းခံထားတဲ့ ဆီကနေ ကိုယ့်ဥာဏ်လေး ကိုယ်ပြန်ရနိုင်ကြဖို့ နှိုးဆော်နေတာပဲ၊
ကဲ ဒါဆို realman ကို နားလည်လောက်ပြီပေါ့။
(ဘယ်စိတ်က အကျူိး ဘယ်စိတ်က အကြောင်းလဲ ဆိုတာ။)
True Answer မှာ အဖေကတော့ရှိခဲ့မှာပါ၊ ထပ်ပြီး သား၊ သမီးများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်သည်
“အဖေလား၊ သားလား”ဆိုတာ ကိုယ့်ဥာဏ်လေးနဲ့ (စာပေစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ မဟုတ်)ကိုယ် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့၊ အသေမှတ်မထားနဲ့လေ။
မုသာဝါဒမှာ.. အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်(ပုံဟန်) သုံးမျိုးလုံး ထည့်ပေးလိုက်တာ.. တော်တော်ပြည့်စုံသွားတယ်..။
ဒီသီလကို.. ယူအက်စ်နဲ့ ဂျပန်ကလူတွေ တော်တော်လေး စောင့်နိုင်တာတွေ့ရတယ်..။ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံ သီလလို့ထင်မိတယ်..။ ဒါသီလ .. လုံ/မလုံ… စံနစ်တကျထိန်းကြောင်းထားနိုင်တာက မီဒီယာကဏ္ဍ လို့ယူဆပါတယ်..။
ဆိုလိုတာက.. တဦးတယောက်(အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ) ပိုင်းက.. မုသာဝါဒပြောရင်..လုပ်ရင်.. မီဒီယာ(လူအများသိစေဖို့ ထုတ်လွှင်ဖြန့်ချိပေးတဲ့ကြားခံ)တခုခုကနေ လူအများစုရဲ့.. အဆုံးအဖြတ် ပေးစေ/ဖြစ်စေတာပဲ..။
အဲဒီလိုနဲ့.. မုသာဝါဒလုပ်ထားတာပေါ်တာမို့.. လူအယုံအကြည်မဲ့ပြီး.. လက်ရှိနေရာကနေ “ဆွဲချ” ဖြစ်သွားစေတာပါ..။
ဒီလိုမဖြစ်အောင်.. နောက်ပိုင်း သတိထားပြုပြင်ကြတာကနေ.. သီလလုံပြီး တိုးတက်သွားတာလို့ တွေးမိတယ်..။
လုပ်ကိုင်၊ ပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာ ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ လူယုံကြည်မှုကိုပျက်ပြားစေတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်သွားရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် လူ့ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်စေမယ့် ကိစ္စတွေကို အတတ်နိုင်ဆုးံထိန်းကြမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းအေးနေကြမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တချို့ကစေတနာ မပါပါဘူး ဘာဖြစ်တာမှတ်လို့ ဆိုပြီး ဆင်ခြေပေးတတ်ကြလို့ပါ။
မုသာဝါဒကံကို တကယ်လုံအောင် နှစ်ရှည်လများ စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကံသည်တူညီသော အကျိုးကိုပေးတတ်သောကြောင့် တော်ရုံနဲ့ လိမ်ညာလို့မရနိုင်ပါဘူး။
စာဆိုတာ လူတွေရဲ့အတွေးအမြင်၊ အသိအမြင်တွေကို အက္ခရာတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတာပါ။ စာထဲမှာ လုံရာကနေ အပြင်မှာပါ လက်တွေ့ လုံကြဖို့မလိုဘူးလား။ အပြင်မှာပါ လက်တွေ့ လုံဖို့ရာမှာ အရင်ဆုံး အတွေး၊ အသိနဲ့ ခံယူချက်တွေမှာ အရင်လုံဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အတွေး၊ အသိနဲ့ ခံယူချက်တွေရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ စာထဲမှာအရင်လုံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စာထဲမှာအရင်လုံမှသာ ပြုမူ၊ ပြောဆို၊ နေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာ လုံကြမှာပေါ့လို့ နားလည်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။